स्थानीय – Daunne News
कावासोती ३ का जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो निर्णय, विपन्न परिवारलाई छात्रवृत्तिदेखि सुत्केरीलाई पोषण सामग्री
नवलपुर: आपसी झगडामा श्रीमतिले पनियाेले हिर्काउँदा श्रीमान् गम्भीर…
एमालेको विजयी र्याली मनाएर फर्कदै गरेको बोलेरो दुर्घटना, ८ जना घाइते
रुखको हाँगो भाँचिएर सूचकको मृत्यु
सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्यालयमा रुखको हाँगो भाँचिएर सूचकको मृत्यु भएको छ । हिजो साँझ हावाहुरीको कारण भाँचिएको हाँगोले लागेर पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका–५ घर २७ वर्षीय सूचक विजय कार्कीको…
कावासोती ६ र १३ मा एमालेको प्यानल नै विजयी
नवलपुर । पुर्वी नवलपरासीकाे कावासोती नगरपालिका वडा नं. ६ र १३ मा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । कावासोती ६ मा अध्यक्षमा एमालेका याम बहादुर थापा र कावासोती १३ मा एमालेका लालबहादुर गुरुङ विजयी हुनुभएको हो । …
गैँडाकोट ९ मा नेपाली काँग्रेसका धामनाथ सापकोटा विजयी
नवलपुर । गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ को वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका धामनाथ सापकोटा विजयी हुनुभएको छ । उहाँले २२४ मतान्तरले विजयी हासिल गर्नुभएको हो । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नेत्रराज सापकोटाले ३६५…
कावासोती ४ , ५ र १४ मा नेकपा एमाले विजयी
नवलपुर । पुर्वी नवलपरासीकाे कावासोती ४ , ५ र १४ मा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । वडा नं ४ मा एमालेका नारायण लोहनी विजयी हुनुभएको हो । उहाँले ७७७ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँले आफ्ना निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काङग्रेसका…
नवलपुरः हुप्सेकोटमा काँग्रेसको अग्रता, जोगाउला त काँग्रेसको विरासत
नवलपुर । पूर्वी नवललपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६ वटा वडा रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसले ५ वटा वडामा जित हात पारिसकेको छ । अहिले हुप्सेकोट ४ को मत गणना चलिरहेको छ । यो हुप्सेकोट…
गैंडाकोटकी निर्वाचन अधिकृत द्वारा पत्रकारलाई गालीगलौज, महासंघद्वारा भत्सर्ना
नवलपुर । गैँडाकोट नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत दिपशिखा मुनाकमीले पत्रकारहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा गरेको गाली गलौजप्रति सर्वत्र आलोचना भएको छ । समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पत्रकारहरुलाई लक्षित उनले गर्दै तुच्छ शब्द प्रयोग गरेपछि उनको…
कावासोती २ मा काँग्रेसको विजयी उत्सव, आधिकारिक मत परिणाम भने आएन
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका २ मा नेपाली काँग्रेसले जित हात पारेको भन्दै विजयी उत्सव मनाइ सकेको भए पनि आधिकारिक मत परिणाम भने अझै आएको छैन । कावासोती नगरपालिका २ मा काँग्रेसका वडाध्यक्ष शिवप्रसाद…
नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्ष विजयी
रामकरण अम्बेडकर ꓽ पश्चिम नवलपरासी पाल्हीनन्दन गाउंपालीका वडा नं १ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएका चुल्हाई यादव विजयी हुनु भएको छ ।उहांले माऔबादीका प्रतिस्पर्धामा रहेका धनपाल चौधरी लाई ४२० मतले पछि पार्दै…
विजयनगरमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थापाकाे निश्चित
कपिलवस्तु । विजयनगर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेकाे तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गाेपाल बहादुर थापाकाे जीत निश्चित रहेकाे नेकपा एमाले विजयनगर गाउँ कमिटीका अध्यक्ष थर्क बहादुर खन्गाहाले बताउनुभएकाे छ । कपिलवस्तुमै एमाले सबैभन्दा ठुलाे र्‍याली…
कावासोती ६ को दलित महिला सदस्यमा सासु बुहारी उम्मेदवार
कावासोती । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका वडा नं. ६ को महिला वडा सदस्यमा सासु बुहारी एउटै पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कावासोती ६ को दलित महिला सदस्यमा सासु…